Villa Bookish 172 metatra toradroa, ny fandikana mandroso ny Log sy White | Yunxing Design - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / 172 Kresy Bookers Villa famandrihana, ny fandikana ny lohan'ny hazo sy fotsy | Yunxing Design
2021 / 08 / 08 FisokajianaInterior design 4131 0
Yunxing Space Architectural Design Alliance Design Interior
Efitra Pejy Boky
“Nieritreritra tao am-poko tao am-poko foana aho fa ny lanitra dia tokony ho toy ny tranomboky.”
Eo amin'ny fiainana, ny fivoaran'ny teknolojia dia mitondra hakamoana fa tsy hiondrana tanteraka, ary nofoanana ny fifandraisana. Amin'ity habakabaka ity dia takiana ny boky ary tsy misy intsony ny hatsarana sy ny fahatsapana. Ny votoatin'ny famakiana taratasy dia ny fiainana miadana, ny fahatoniana ary ny fialamboly.
Ny tontolo iainana dia ampiasaina hitarika ny safidin'ny fiainana sy ny tanjonao. Tsy fikatsahana lalina ny sary intsony ny famolavolana. Ny mpanelanelana amin'ny zavatra dia mety ho fanoharana amin'ny zavatra anatiny sy ny fahatsapana. Bevohoka amin'ny toe-tsaina roa ny sehatra, ary tsy misy toerana izay tsy mety amin'ny famakiana na amin'ny resaka. Ny faritra midadasika misy feo mahafinaritra dia tapaka ao amin'ny be atao sy ny tara.
Ity tranga ity dia miorina ao amin'ny Distrikan'i Jiangyan, tanànan'i Taizhou, faritanin'i Jiangsu, izay iray ihany koa amin'ny tetikasanay momba ny tetik'asa ivelan'ny toerana sy ny tetikasan'ny asa fanamboarana. Ny trano dia duplex misy valindrihana misitery. Ireo 130 metatra toradroa amin'ilay trano tany am-boalohany dia tsy afaka mamaly ny filan'ny fianakaviana misy olona efatra intsony, ka naidinay tany an-toerana ilay faritra banga tany am-boalohany mba hamenoana ny faritra azo ampiasaina.
Ny endrika dia manambatra ireo singa ao anaty boky manerana ny habakabaka, manokatra ny varavaran'ny fahalalana ary mandika ny fahatakarana ny fiainana. Ny varavarankely atsimo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia rafitra tsy mikorontana tany am-boalohany, noho izany dia ampiasainay ny fitaratra fitaratra. Ny ambony dia mitaratra amin'ny alàlan'ny fitaratra, toy ny mametraka ny boaty hazo eny amin'ny habakabaka. Ny vatan'ny habakabaka amin'ny loko hazo tany am-boalohany dia voahodidin'ny maitso na aiza na aiza. Eo ambanin'ny taratry ny hazavana dia mizara ny habaka voajanahary sy mangarahara ary zavakanto kokoa izy.
Ny loko fotsy fotsy tsotra dia ahitsy amin'ny alàlan'ny fanitsiana tsipika matevina sy manify miolakolaka sy mahitsy. Ny endrika dia mijery ny mety hisian'ny fifandraisana anatiny ao amin'ireo faritra habaka samihafa. Ny rakipeo dia vita amin'ny sisiny anatiny amin'ny tohatra, ary mifamatotra amin'ny fandalinana mangarahara, akaikin'ny fitoeram-bokin'ny tranomboky.
Ny tohatra dia mampifandray ny ambaratonga ambony sy ambany, ary ny rindrin'ny boky dia miendrika fizarazaran-tany, mangarahara kokoa ary miteraka ny vokatra hita maso amin'ny fanitarana ny habaka. Na ny tohatra aza dia toerana hamakiana, izay hazavana sy aloka dia toy ny sambofiara mangina. Ny toerana kely eo ambanin'ny tohatra, ampiarahina amin'ny famolavolana kabinetra fitehirizana, dia mampitombo ny toerana fitahirizana, sady tsara no azo ampiharina.
Manomboka amin'ny rindrin'ny boky manankarena mankany amin'ny ilany hafa, mihazava kokoa ny habaka amin'ny hazavana avy amin'ny lavarangana. Ny lakozia fisakafoana dia manitatra elanelam-potoana maro, ary mangarahara nefa tsy voafetra. Ny sideboard dia manome toerana fitehirizana ampy handraisana ireo loko mankaleo sy madio. Ny sisintany miloko hazo dia mamorona ny fomba fijery voajanahary amin'ny faran'ny tsipika fahitana. Alefaso ny mozika ary mipetraha mba hiresaka. Na ny fotoana aza dia hiadana kely.
Ny jiro mitsivalana dia manome jiro ho an'ny tohatra amin'ny alina, manazava ny gadon'ireo tohatra mafana sy voajanahary, miaraka amin'ny ambony sy ambany.
Ny fitaovan'ny rindrin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny tompony dia tsy mihaona amin'ny fomba mahazatra, ary ny loko hazo mafana dia mifamatotra amin'ny fotsy tsotra. Ny firafitry ny varavaran'ny kabinetra sy ny varavaran'ny efitrano dia mirakitra loko. Ny hazavan'ny andro sy ny mazava dia mamela ny mari-pana any amin'izay alehany.
Ireo entana ao amin'ny habaka misaraka dia azo anaingoana manokana. Ny safidin'ny zavatra dia mitombo miaraka amin'ny trano, manendasa ny rahona hamoaka ny safidin'ny toetra. Ny fon'ny olona no lasa lohahevitra.
Ny fianarana dia misy fetra, tsy hita maso ny lova. Ny fomban'ny fianakaviana no rohy manan-danja indrindra amin'ny lovan'ny fianakaviana. Ary ny fomban'ny fianakaviana tsara indrindra dia tsy maintsy ny fomba fiankinan-doha amin'ny fomban-drazana amin'ny famakiana. Ny ankizy mihalehibe amin'ny fofon'ny boky dia tsy maintsy manankarena am-po. Ny trano fianarana tsara indrindra dia ny efitrano fianarana ao an-tranonao.
Anaran'ny tetikasa / Efitra pejy amin'ny boky
Toerana misy ny tetikasa / Taizhou / Beijing Garden Diamond Bay
Ekipa mpamorona / Yunxing Design
Vanim-potoanan'ny tetik'asa / 2020.04-2021.01
Toeram-panorenana / 172㎡Project Type / Villa mifatotra
Vidin'ny tetik'asa / Sahabo ho 650,000 (ankoatry ny fitaovana elektrika) Sary an-habakabaka / zavakanto hita maso Xinkong Fitaovana / veneer hazo, tabilao an-dranomasina, loko vita amin'ny tara-by
Previous :: Malaza ny fomba Wabi-Sabi, toy izany koa ny micro-simenitra! Next: Sehatra kanto izay sady taloha no maoderina, mandova ny hakanton'ny atsinanana ｜ fisaintsainana Millo